Bruico Jewelry inikeza imigexo ngokwezifiso, umklamo, nokukhiqizwa nokuqhutshwa Imisebenzi eprofetjhinali, ikakhulu ukugxila 14K futhi 18k ibhizinisi KaMose. Bruico Jewelry yasungulwa ngo 2015 futhi ithatha indawo 500 square metres, okuyinto has imboni yayo, imishini yokunyathelisa, imishini wokucwebezelisa, imishini CNC nemishini kagesi.
Sinikeza professional ubucwebe design and ukukhiqizwa amasevisi. Senze impumelelo enkulu futhi kusungulwa iqembu lochwepheshe ngokuphathelene wokuthenga, yokuthengisa, admin, ezezimali nokumaketha. Okwamanje inkampani yethu ine abasebenzi 50, 3 abaklami 2 Umdwebo ochwepheshe. Ithimba lethu kukhona sasisebasha futhi sinamandla, nge fabulous ingcweti imimoya futhi enkulu imfashini umqondo. Thina angaphendula imfuneko zamakhasimende ezingaphansi amahora angu-48.
Sine nakho ocebile ubucwebe design and ukukhiqizwa. Ikhwalithi ephezulu kuqinisekisiwe futhi athembekile. Imikhiqizo yethu abe ezahlukene zokusetshenziswa, ezifana ukugubha phakathi usikisela, khona ukukhuthazwa, izipho kwemicimbi emikhulu. Ama-oda ziqhamuka niche imigexo ezitolo, nabaqambi ezizimele kanye boutiques.